कमरेड प्रचण्डः बाबुराम-विप्लव र म एकभए कायापलट हुन्छ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > कमरेड प्रचण्डः बाबुराम-विप्लव र म एकभए कायापलट हुन्छ!
admin October 3, 2020 October 3, 2020 Uncategorized	0
काठमाडौं: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई मूलधारमै फर्किन आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी छाडेर हिँडेका प्रदेश २ का नेताहरुलाई धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपामा प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
अल्का अस्पतालमा घट्यो यस्तो अचम्मकाे घटना… यस्तो अवस्थामा भेटिए एक युवा
दे’ह’त्या’ग गरेकि २५ वर्षकि युवतीको पोष्टमार्टम गर्नुअघि गरिएको स्वाव परिक्षणमा कोरोना पुष्टि
त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो यसरी करणी गरे !